Otu ụbọchị na Chernobyl Nuklia Ike Osisi - Ntugharị | Akụkọ Njem
Chernobyl, otu ụbọchị na osisi nuklia (akụkụ nke abụọ) - njem mmụta
Enric Gili | | General, Kiev, Ihe ị ga-ahụ, Ukraine
Thebọchị abịawo, ụbọchị anyị na-eleta Chernobyl na mpaghara nghazi na mwepu nuklia.
Bọchị pụrụ iche nke anyị agaghị echefu echefu. Njem njem ebe anyị ga-ahụ ihe niile fọdụrụ mgbe ọdachi nke 1986 gasịrị.
Anyị zutere na 8 nke ụtụtụ na Maydan Square, n'etiti Kiev, ebe ụgbọ ọrụ ndị ọrụ na onye ndu na-echere anyị.
Ha kwesiri ichikota ndi njem nleta niile site na 3 ubochi di iche iche n'otu ubochi n'ihi agha ndi agha no na mpaghara. Anyị mechara chọpụta na ịdọ aka ná ntị ụgha nke bọmbụ n'ezie mere n'ezie!
Na mkpokọta anyị ga-abụ ihe dịka ndị njem nleta 12 nke ọtụtụ mba.
1 Entbanye n'ime mpaghara mwepu nuklia
2 Chernobyl, akụkọ ihe mere eme nke ọdachi
3 Ike nuklia
4 Pripyat, obodo mmuo
Entbanye n'ime mpaghara mwepu nuklia
2 awa na-eje ije ha kewara anyị rue mgbe nlele mbụ agha. E nwere akara paspọtụ mbụ na ndebanye aha ndị ọbịa. Anyị anọworị na gburugburu 30 kilomita gburugburu na ụlọ ọrụ nuklia nuklia.
Nke mbu anyi gara obodo gbahapụrụ agbahapụ nke naanị otu nwanyị gbara afọ 85 bi, tupu ọdachi ahụ bụ 4000 bụ ndị bi na ya. Ọ bụ a ghostly obodo. Bylọ niile erila “ọhịa”. E bibiri ihe niile. O doro anya na enweghị ọkụ eletrik, gas, mmiri ma ọ bụ ihe ọ bụla. O siri ike ịghọta na nwanyị a bi ebe ahụ, ọ bụghị naanị n'ihi nkewapụ ya kamakwa n'ihi ihe egwu ahụike (ana m echetara gị na anyị nọ n'ime gburugburu na nje nuklia).
Mgbe ahụ, anyị gafere n'okporo ụzọ ahụ ruo mgbe anyị ruru obodo ochie nke Chernobyl. N'oge gara aga, ọtụtụ puku ndị bi na ya, ugbu a narị ole na ole, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile ndị injinia na ndị agha raara nye mkpochapụ. Otu obodo ghọrọ ebe nsọ ma cheta ndị metụtara.
Mgbe ahụ, anyị ga-aga ebe nlele ọzọ, 10 km site na chernobyl 4. Site na nke a ọ gaghị ekwe omume ibi, ọkwa nke mmetọ na mpaghara ụfọdụ dị oke elu.
Chernobyl, akụkọ ihe mere eme nke ọdachi
Dị nnọọ ka anyị gafere ahịrị a, anyị gara ebe a na-elekọta ụmụaka. Ihe niile hapụrụ dịka ndị ọbịa hapụrụ ya n'oge ọdachi ahụ. Mita ahụ eduzila nnukwu ọkwa nke radieshon. Anyị nwere ike ịnọ na saịtị a maka nkeji ole na ole maka ihe nchekwa. Ihe niile anyị na-ahụ dị ka ihe si na fim dị egwu, ọ dị oke mma, ọ na-atụkwa ụjọ. N’akụkụ ụlọ ahụ anyị na-ahụ akwụkwọ mmado nke nje nuklia.
Ọ dị kilomita ole na ole na-aga n'ihu, anyị na-aga n'ụzọ aka ekpe, ọ na-akpọrọ anyị na ọta Soviet / mgbochi-agha Soviet DUGA-3, a kacha mara amara n’oge ahụ dị ka «Woodpecker». Ugbu a, ọ bụ nnukwu mgbidi mgbidi nchara dị n'etiti ọhịa, 146 mita n'ogologo site na ọtụtụ narị obosara. Ọ bụ emepụtara iji chọpụta ogbunigwe ndị nwere ike ịda n'akụkụ ọdịda anyanwụ.
Anyị laghachiri n'okporo ụzọ ma rute na nkeji ole na ole na ụlọ ọrụ nuklia Chernobyl. Mmetọ mmetọ adịlarị.
Anyị na-aga site na onye ọ bụla na-arụ ọrụ ihe dị ka mita 100 ruo mgbe anyị ruru chernobyl 4, nke gbawara. N'ebe a, anyị kwụsịrị iji were foto ma tụgharịa uche na ụlọ dị nso, a na-akpọ sarcophagus, bụ nke a ga-eli 4 na-arụ ọrụ na-adịgide adịgide wee belata ọkwa radiation kpamkpam. Anyị nwere ike ịhụ na ọtụtụ ndị injinia na ndị agha na-arụ ọrụ kwa ụbọchị maka ọrụ dị otú ahụ.
Naanị n'ofe okporo ụzọ anyị na-ahụ Osisi Uhie, otu n'ime ihe ndị kachasị emerụ emerụ. Ohia nke osisi ya na-acha uhie uhie site na radieshon. Ihe ọ bụla na-eto eto na-emerụ ya, a ga-egbutu ya.
Ọ bụ n'oge a ka m ghọtara na m nọ n'ihu ụlọ ọrụ nuklia Chernobyl, bụ onye mgbawa ya kpatara otu ọdachi kacha njọ na akụkọ ntolite na-adịbeghị anya. Otu ụyọkọ mmetụta dị na ahụ m: mwute, mmetụta uche, ... ihe m hụrụ juru m anya.
Ọzọ anyị ga-abịarute akara ama ama ama ama n'obodo mgbaasị, Pripyat 1970, na akwa mmiri nke jikọtara mpaghara ebe ọkụ nuklia na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ.
Pripyat, obodo mmuo
Pripyat bụ otu n'ime obodo kachasị ọhụrụ na nke kachasị mma ibi na mbụ Soviet Union, ọ bụụrụ mba ahụ mpako. N'oge ọdachi ahụ, mmadụ 43000 dị ndụ, ugbu a ọ dịghị onye ọ bụla.
Onye agha ikpeazụ na-enyocha asambodo anyị ma wulite ihe mgbochi nye anyị ileta obodo ahụ. Ihe mbu anyi huru bu isi uzo ahu ghọrọ ohia ma gbahapụ kpamkpam ụlọ Soviet mebisịrị kpamkpam.
Nkeji 5 gbadata n'okporo ámá a ma anyị erute na square. Site n'ebe ahụ anyị gara ochie ụlọ ahịa, ụlọ ihe nkiri ma gafere n'akụkụ ụlọ nkwari akụ ahụ. Niile rusted, leaky na-enwe mmetụta na otu ụbọchị ọ ga-daa.
Metersgbọ ole na ole ka e mesịrị, anyị rutere mpaghara nke wheel Ferris na ụgbọala na-agba ọsọ, n'ezie ihe oyiyi kachasị nke Pripyat anyị na-ahụ na Internetntanetị. Radieshọn dị elu ebe a.
Anyị na-eme njem na mpaghara a nke obodo. Ọzọkwa mmetụta nke ịnọ na ihe nkiri egwu na-abịakwute m, mana ugbu a agwakọtara na mmetụta nke egwuregwu vidio, ihe niile dị ịtụnanya na mwute, na-adọrọ mmasị.
Ọzọ anyị ga-aga ebe ọzọ dị mkpa, mgbatị ahụ. N'ebe ahụ, anyị gara ụlọ ahụ dum, gụnyere ọdọ mmiri, mgbatị ahụ na ogige basketball. Ebibiri ha niile. Ka anyị na-aga, anyị na-ahụ ụzọ ime ụlọ nwere nkpuchi gas n’elu ala.
Na njedebe nke ụzọ anyị na-alaghachi n'obodo Chernobyl ma rie n'ụlọ nri, naanị ebe na ebe ị nwere ike iri nri ma hie ụra.
Na ụzọ Kiev, ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ na onye ndu nwere ike igosi anyị akwụkwọ na televishọn na ụgbọ ala. O kwekọrọ na ndụ ndị bi na Pripyat ọnwa ole na ole tupu ọdachi ahụ. O na-enye anyi ihe akaebe banyere otu ha siri bie ndu na ihe o bula. Anyị nwere ike iji ihe anyị hụrụ na TV tụnyere ihe anyị hụrụ na saịtị ahụ.
Ọ jọgburu onwe ya ma dị iche iche ihe anyị nwere njem mmụta ahụ nke na anyị amaghị ihe anyị nwetara rue ụbọchị agafee. Ugbua n'ime ụlọ dị na Kiev na ụbọchị ndị sochirinụ, anyị tụlere ihe niile anyị hụrụ na otu o si masị anyị.
Ee, anyị agaala na Chernobyl nuklia ike osisi!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Kiev » Chernobyl, otu ụbọchị na osisi nuklia (akụkụ nke abụọ) - njem mmụta
Parthenon nke dị na Atens
Njem Ista Island